रत्नलक्ष्मी मावि रिघाको हिरक महोत्सवको हिसाव सार्वजनिक -
०६, कार्तिक÷गल्कोटरत्नलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय गल्कोट नगरपालिका वडा नं. ११ रिघाको गत मंसिरमा सम्पन्न हिरक महोत्सवको आम्दानी खर्च सार्वजनिक भएको छ । बुधवार विद्यालयमा एक कार्यक्रमका विच सार्वजनिक गरिएको हिसाव अनुसार महोत्सवमा २ करोड ५२ लाख १४ हजार २ सय ४१ रुपैयाँ बोल आम्दानी भएको छ भने ५४ लाख ८४ हजार ८ सय ३९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। सो चन्दा सहयोग वोल मध्ये १ करोड ४० लाख ५४ हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ रकम उठेको र वाँकी १ करोड ११ लाख ५९ हजार ४ सय ९० उठ्न वाँकी रहेको आर्थिक समितिका कोषाध्यक्ष आशा रानाले जानकारी दिनुभएको छ। सो रकम केहिसमयमै उठाउने गरि तयारी गरिएको आर्थिक समितिका अध्यक्ष धन बहादुर श्रीसले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा आर्थिक समितिका सचिव दान बहादुर श्रीसले सरोकारवालाले गरेको प्रश्नको उत्तर दिनुभएको थियो।
विद्यालयले हिरक स्मारिकाको पनि तयारी गरिरहेकोले लेख रचना उपलब्ध गराउन श्रष्टाहरुलाई र वोल रकम विद्यालयमा बुझाउन सबै चन्दादाताहरुलाई आह्वान समेत गरेको छ। उठेको रकमको विवरण मात्रै विद्यालयको स्मारिकामा प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक तुल बहादुर श्रीसले जानकारी दिनुभएको छ।
यसै विच सो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गल्कोट नगरपालिकाका उपमेयर रेनुका काउचाले विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय गराउन हिरक महोत्सवको बाहाना बनाएर रकम उठाइएको वताउँदै अव वोलिएको रकम उठाउन र वाचागरिएको काम पुरा गर्न ढिला गर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्राकृतिक र साँस्कृतिक हिसावले अनुपम रिघालाई शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न एकजुट हुन र काममा लाग्न आह्वान गर्नुभएको छ।
कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष डम्बर श्रीसले हिरक महोत्सवको वेला गरिएको वाचा पुरा गर्न केहि चुनौतिहरु समेत रहेको भन्दै, सवै क्षेत्रबाट जागरुक भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। वडा अध्यक्ष श्रीसले वडा नं. ११ को समग्र शैक्षिक नेतृत्व रत्नलक्ष्मी माविले गर्नुपर्ने बताउँदै आधार विद्यालय सवलिकरणमा समेत विद्यालयको भूमिका हुने बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा आर्थिक समितिका अध्यक्ष धन बहादुर श्रीस, सचिव दान बहादुर श्रीस, कोषाध्यक्ष आशा राना लगाएतले बोल्नुभएको थियो।
कार्यक्रम विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तारा बहादुर पुनको अध्यक्षता, प्रधानाध्यापक तुल बहादुर श्रीसको स्वागत मन्तव्य तथा शिक्षक नारायण पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो।
सो कार्यक्रममा हिरक महोत्सवमा सहयोग गर्ने ५ ओटा आमा समुह तथा १ क्लवलाई ५÷५ हजार नगद सहित सम्मान गरिएको थियो। विद्यालयले गत मंसिर २५ गते देखि २९ गते सम्म हिरक महोत्सवको आयोजना गरेको थियो।